ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိယောက်ျားလေးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြားအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂၀၁၄) - Your Brain On Porn
တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယအတွက်အထီးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြား HIV-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအပေါ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ exposure (2014)
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014 နိုဝင်ဘာ 25;9(11): e113599 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0113599 ။
Mahapatra B ကို1, Saggurti N ကို2.
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် HIV ပိုး-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့အပေါ်သုတေသနအိန္ဒိယတွင်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများတွင်အထီးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြား HIV-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
ဒေတာများကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလေးပြည်နယ်များအတွက် 2007 ခရိုင်ကိုဖြတ်ပြီး 08-21 အတွက်ကောက်ယူ cross-section စစ်တမ်းကနေရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ဖြေဆိုသူအလုပ်အတွက်အတိတ်ကာလနှစ်နှစ်အနည်းဆုံးနှစ်ခုသောနေရာများမှရွှေ့ပြောင်းခဲ့သူ 11,219 နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေအသက် 18 အထီးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပါဝင်သည်။ Bivariate နှင့် multivariate နည်းလမ်းများကြည့်ရှုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် HIV ပိုး-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆနျးစစျဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ရွှေ့ပြောင်း၏ two-ပဉ္စမ (40%) ကြိုတင်စစ်တမ်းမှတလတွင်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။ ကျော်ကိုငါးနှစ်အဘို့, စာတတ်မြောက်လက်မထပ်ရသေးနှင့်ဝေးဇာတိရွာကနေ 25-29 နှစ်ပေါင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအသက်သူတို့ရဲ့များထက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန် ပို. ခဲ့ကြသည်။ နှင့်မရတဲ့လိင် (AOR: 4.2, 95% CI: 3.7-4.8) ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေးသူကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ paid (: 4.2, 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [CI] 3.7-4.7 Adjustments လေးသာမှုအချိုးအစား [AOR]) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် , အစီရင်ခံစာ paid လိင် (AOR: 2.3, 95% CI: 1.7-3.0) တွင်ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံကိုကာလသားကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာတွေဟာသူတို့ရဲ့များထက် (AOR: 1.7-95: 1.5, 1.8% CI).
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်မြင့်မားသောအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်တွေ့ရှိချက်များအရရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်လိုအပ်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာအစီအစဉ်များသည်ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလျှော့ချရန်အားလပ်ချိန်များတွင်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုဆွဲဆောင်ရန်အခြားနည်းလမ်းများရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။